Ishishini laseTurkey I-5 -10 yezigidi zeerandi kumazwe angaphandle ngelixa iiBhiliyoni zee-Euro zeeThuthi zeeLoliwe zihamba ziye kubaphambukeli | RayHaber | Uloliwe | Indlela enkulu | imoto cable
ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia06 AnkaraIshishini laseTurkey I-5-10 yezigidi zeerandi kumazwe angaphandle ngelixa iiBhiliyoni zeeRandi zeNdlela yokuHamba zoLoliwe ziye kubaphambukeli
04 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, 16 Bursa, 34 Istanbul, Ummandla waseMntla Anatolia, railway, Izithuthi, JIKELELE, KENTİÇİ Rail Systems, ZOMHLATHI, Sithili saseMarmara, Metro, ETURKEY, tram 0
Ngelixa ishishini laseTurkey lijikeleza ukuze kuthunyelwe ii-euro ezisisigidi, inkqubo yethenda yee-euro ezizigidi ngezigidi kwilizwe lethu iya kubaphambukeli
Ingcali yezorhwebo yaseTurkey i-5-10 i-euro yezigidi ukuthumela ngaphandle, ndiza kudala imisebenzi kwilizwe lam, ngelixa iibhiliyoni zeeuros kurhwebo lwangaphandle ziya kwelinye.
AmaTshayina aphumelele ithenda yezithuthi zangaphantsi ze2009 ezigcinwe e-İzmir kwi-32 ngaphandle kwegalelo lasekhaya kunye nexabiso le-33 yezigidi zeerandi.
Ithenda yangaphantsi kwe2012 eyayibanjelwe e-Ankara e-324 iphumelele ngamaTshayina nge51% igalelo lasekhaya kunye ne-391 yezigidi zeedola.
I-Czechs iphumelele ithenda ye-2012 tram ebibanjelwe eKonya e-60 ngaphandle kwegalelo lasekhaya kunye nexabiso le-104 yezigidi zeerandi.
IHyundai Eurotem iphumelele ithenda yezithuthi ye2015 ebibanjelwe eIstanbul e300 kwi-50 yezigidi ze-280 zamawaka e-Euro nge-200 yegalelo lasekhaya.
AmaTshayina aphumelele ithenda yezithuthi zangaphantsi ze-2015 ezigcinwe e-İzmir kwi-85 ngaphandle koncedo lwasekhaya kunye nexabiso lesigidi se-71 sezigidi ze-400 zee-Euro.
AmaTshayina aphumelele ithenda yangaphantsi ye2018 ebibanjelwe eIstanbul e272 ngexabiso le-50 yezigidi ze-2 yezigidi ze-TL, phantsi kwemeko yegalelo lasekhaya le-448.
Ithenda yeMetro ye-1 yezigidi ze-196 yezigidi ze-499 ze-923 Euro, ekucetyelwe ukubanjwa eKonya ngoku, yaphinda yanikwa abantu baseTshayina. Kutheni le nto eze nemali yaseTshayina kwaye efuna ukuvelisa zonke izithuthi zangaphantsi ngesiseko seziseko zakhe kunye nokusayinwa kwabatyikityiweyo. Ngethemba lokuba baya kongeza i-80% eyimfuneko yesongezelelo ekhaya.
Ukongeza, kwithenda yezithuthi zeMetro ye172 eza kubanjelwa i-Istanbul Airport, izithuthi kufuneka zithunyelwe kwiinyanga ze8. Ixabiso lethenda limalunga ne-300 yezigidi ze-euro. Ke ndifuna imoto engxamisekileyo kwakhona kumphambukeli mhlawumbi nayo iya eTshayina. Kuyadingeka ukubuza ukuba kutheni oosomashishini baseTurkey bengazange bacebe zonke ezi zinto ngelixa isikhululo seenqwelomoya sasakhiwa kwiminyaka eyadlulayo.
Ngaphaya koko, ishishini laseTurkey liyakwazi ukwakha zonke izibonelelo kunye neemoto zazo zonke iinkqubo zendlela kaloliwe.
Ngaba asicwangcisanga i11 kwisicwangciso sophuhliso de i-2023 ibe yi-80% igalelo lasekhaya kunye nohlobo lwesizwe? Khange sitsho na ukuba kwii-2023 Strategies Strategies, iimpahla zasekhaya ziya kunikwa kuqala kwaye iimpahla ezingeniswe elizweni ziya kuthathelwa indawo zizezomthonyama?
Ithenda ye-1 yezigidigidi ye-Euro eza kubanjwa kungekudala kwaye ithenda yemoto ye-300 yezigidi zeerandi eza kubanjelwa e-Istanbul iyakuba lihlazo kuRhulumente waseTurkey kunye nabaMzi-mveliso ukuba banikwe amaTshayina okanye nabaphambukeli. Emva koko, kukho iithenda zemetro ephantsi kolwakhiwo kunye neeprojekthi e-Izmir, Ankara, Istanbul nase Mersin. Amaxabiso apheleleyo kwezi i-5 yeebhiliyoni zeerandi.
Ndicinga ukulahla amaTshayina kunye nabaphambukeli, i-11. Inye kuphela indlela yokufezekisa izigqibo zenkqubo yoLoliwe kaZwelonke kunye neLizwe ezithathwe kwiSicwangciso soPhuculo. Kananjalo imali eTurkey abakule TÜLOMSAŞ imveliso, TÜVASAŞ, DURMAZLAR, BOZANKA ukuba, ASELSAN, njengoko yonke abenzi inkqubo kaloliwe TÜDEMSAŞ kunye ASAS ukubakhulisa kwethu kunye phantsi kophahla nequmrhu inkqubo kaloliwe imisebenzi yonke eTurkey njengoko y'all zasekuhlaleni eentlanga Ndifuna igunya likarhulumente kunye nenkuthazo kaRhulumente yokuthetha ukuba ndiza kukuxhasa.
Kuba zonke iinkampani emhlabeni ziya zisomelela ngokudibanisa ukukhuphisana. ICRRC yaseTshayina iphuhlise kwisakhiwo esomeleleyo ngokudityaniswa kwenkampani ye10, evelisa iinkqubo zikaloliwe. Inkampani yaseJamani Nokia kunye nenkampani yaseFransi iAlstom yaqhubeka nokudibana ukuze ikhuphisane neCRRC yaseTshayina.
Ngokunjalo, ukuba asinakukwazi ukwakha imvumelwano eyomeleleyo kwilizwe lethu, ezi nkampani zivelisa zonke iiNkqubo zoThuthazo loLoliwe kwaye zenza utyalomali olukhulu kwilizwe lethu ziya kuvala iingcango zazo umntu ngamnye kwaye phantse abasebenzi be15.000 abasebenza kwezi fektri bangasebenzi.
Ezi nkampani zisokola ukuphumelela i-5-10 yezigidi zeerandi eRomania, ePoland, Thailand nase11. Ukuba asihambelani nezigqibo ezithathiweyo kwisicwangciso sophuhliso kunye nokuhambisa iithenda zerandi yesigidi seerandi kwilizwe lethu kubaphambukeli, iya kuba yimfesane kumzi mveliso wethu wesizwe.
Dr. Qha ga mshelana Ilhami ngqo
Iimpawu zaseTurkey ezenziwa ngabaphambukeli
Indlela engaphantsi kwenkampani yaseTurkey eUkraine…
I-100 Biliyoni ye-Euro Indawo yoLuntu kwiiNkqubo zoThutho
Umasipala waseKartepe uthenge i5 yeCable Car T
I-24 IYure yokuThutha eSanliurfa
Uqoqosho lwaseIndiya kunye noTyalo-mali lweNkqubo yoLoliwe